Zvidzidzo zveBhaibheri Zvevana—Tsamba Inobva kuDare Rinotungamirira
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (South Africa) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Edo Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Kabiye Kabuverdianu Kannada Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mixe Moore Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuPeru Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Nzema Okpe Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Kuvashumiri vaJehovha Vanodiwa:
Sevanamati vaJehovha, tinoda Shoko rake, Bhaibheri. Tine chokwadi chekuti rinotaura zvakarurama nezvezvakaitika kare, ndiro chete rinogona kutitungamirira muupenyu uye rine uchapupu hunofadza hunoratidza kuti Jehovha anoda vanhu. (Pisarema 119:105; Ruka 1:3; 1 Johani 4:19) Tinoda chaizvo kubatsira vamwe kuti vadzidze chokwadi chinokosha chiri muShoko raMwari. Saka, tinofara chaizvo kubudisa bhuku rino rinonzi Zvidzidzo Zvaunowana muBhaibheri. Regai timbokuudzai zvishoma nezvebhuku racho.
Bhuku rino rakanyanya kunyorerwa vana, asi rinogonawo kushandiswa pakubatsira vanhu vakuru vanoda kudzidza zvakawanda nezveBhaibheri. Uyewo, sezvo Bhaibheri rakanyorerwa munhu wese, hapana mubvunzo kuti tese zvedu tichabatsirwa nekuongorora zvidzidzo zvirimo, towana mufaro wechokwadi.
Bhuku rino rine nyaya dziri muBhaibheri dzinotaura nezvevanhu, kubva pavakasikwa zvichienda mberi. Pakashandwa zvakasimba kuti nyaya dzemuBhaibheri dzitsanangurwe nemashoko akapfava, akajeka uye pese pazvaiita dzakarongwa zvichienderana nenguva yadzakaitika.
Bhuku rino rinotaura nyaya dziri muBhaibheri. Mashoko akashandiswa pakurinyora nemifananidzo irimo zvinobatsira munhu kuti aite seari kutoona nyaya dzemuBhaibheri dzichiitika uye zvinonyatsobudisa manzwiro evanhu vanenge vachitaurwa nezvavo.
Bhuku rino rinotibatsira kuona kuti Bhaibheri ibhuku rinotaura nezvevanhu, vaya vakateerera Jehovha nevaya vasina kumuteerera. Rinoitawo kuti tide kudzidza kubva pane zvavakaita. (VaRoma 15:4; 1 VaKorinde 10:6) Bhuku racho rine zvikamu 14. Panotanga chikamu chimwe nechimwe, pane pfupiso yezvatinogona kudzidza.
Kana uri mubereki, unogona kuverenga chidzidzo nemwana wako mobva makurukura mifananidzo irimo. Zvadaro, munogona kuzoverenga mese mavhesi eBhaibheri akatorwa chidzidzo chacho. Batsira mwana wako kuti aone kubatana kwezvaanenge averenga muBhaibheri nezviri muchidzidzo chacho. Izvi zvinogona kushandawo pakubatsira munhu mukuru kuti anzwisise zvinotaurwa neBhaibheri.
Tine chivimbo chekuti bhuku rino richabatsira vanhu vese vane mwoyo yakatendeseka, vangava vakuru kana vadiki, kuti vadzidze zviri muShoko raMwari, voshandisa zvavanenge vadzidza muupenyu hwavo. Izvi zvichaita kuti vamunamate vari pamwe chete nevanhu vake vaanoda.
Zvidzidzo Zvinobva muBhaibheri—Tsamba Inobva kuDare Rinotungamirira